PUBG (२०२०) जस्तो खेलहरू - शीर्ष Al विकल्पहरू - गेमि।
के तपाइँ PUBG समान खेल खोज्दै हुनुहुन्छ?ठिक छ, आज, तपाईं सही ठाउँमा आउनुभएको छ। हामी केहि राम्रा खेलहरू छलफल गर्नेछौं जुन तपाईं PUBG को सट्टा खेल्न सक्नुहुनेछ। यी खेलहरू प्रमुख पक्षहरूमा PUBG समान छन्, र केहि खेलहरू विश्वव्यापी रूपमा उच्च-रेटेड खेलहरू छन्।त्यसो भए पोष्टमा सिधा डाईभ गरौं, र PUBG जस्ता खेलहरू हेरौं।
२०२० मा सर्वश्रेष्ठ PUBG विकल्पहरूको सूची:
१. ड्यूटीमा कल गर्नुहोस्: वारजोन
तपाईंले कल अफ ड्युटी: वारजोनले सूचीमा काम गरिरहेको देख्नु भएको हुन सक्छ। कल अफ ड्यूटी वारजोन १ -० खेलाडीहरूको साथ पहिलो व्यक्ति शूटर ब्याट रोयाल खेल हो र उच्च-गुणवत्ता ग्राफिक्स र गेमप्लेका लागि अविश्वसनीय लोकप्रिय भएको छ। Warzone एक अद्भुत नक्शाको साथ आउँदछ, ग्रेट हतियारको प्रयोग सहित। खेलको प्रत्येक खण्ड धेरै राम्रोसँग निर्मित छ, र सबै दयालु पक्षहरूको ख्याल राखिएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा, हामी खेल मनपराउँदछौं किनकि तपाईं मरे पछि खेलमा प्रवेश गर्ने अर्को मौका पाउनुहुन्छ; गुलागमा जित्ने ठाउँ, जहाँ एक-बाट-एकमा झगडा भएको छ, तपाईं आफ्ना टोलीलाई पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ जुन खरीद नक्शाबाट फैलिएको हो।
कल अफ ड्युटीले एक थप मोड समावेश गर्दछ, जसलाई लुट्ने भनिन्छ। यस मोडमा तपाईले १० लाख डलरको नगद रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, नक्सामा फैलिएर। सबै शत्रुहरूसँग लडाई गरेपछि रकम जम्मा गर्ने टोलीले विजय लिन्छ। यदि तपाईं कल अफ ड्युटी: वारजोन डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ भने, क्लिक गरेर यसलाई नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ।
फोर्टनाइट अर्को ब्याटल रोयाल खेल हो जुन विश्वभरि लोकप्रिय छ। यो खेलको ग्राफिक्स छ जुन बजारमा उपस्थित सबै अन्य रोयल रोयाल भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न छ। फोर्टनाइटसँग यसको ग्राफिक्स, भिजुअल र गेमप्लेको दृष्टिले एक जीवन्त दृष्टिकोण छ। तपाईं र तपाईंको शत्रु बीचमा एउटा बाधा सिर्जना गर्न काठ, ईंटहरू र धातुहरू काटेर यो खेलमा निःशुल्क संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यो बैटल रोयाल एक सय खेलाडी र अन्तिम बाँचेको बीचमा छ विक्टोर रोयाल।
फोर्टनाइट लोकप्रिय हुनुको कारण यसको asonsतुहरू र फोर्टनाइटका विकासकर्ताहरूले निर्माण गरेका कथाहरूको कारण हो। हाल, फोर्टनाइट भर्खरै यसको सबैभन्दा ठूलो घटनासँग सम्पन्न भएको छ जहाँ उनीहरूले मार्वल सिनेमेटिक ब्रह्माण्डसँग सहयोग गरे। अब तिनीहरूसँग सीजन:: शून्य बिन्दु हाल चलिरहेको छ, जसले नक्सा, बन्दुक, र ब्याट पासको सर्तमा केही कठोर परिवर्तनहरू गरेको छ।
फोर्टनाइटसँग चार बैटल रोयाल गेम मोडहरू छन्, अर्थात् सोलो, डुओस, ट्रायोस र स्क्वाड। तिनीहरूसँग फरक LTM मोडहरू छन् जुन बारम्बार परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यहाँ एक मोड छ, जसलाई क्रिएटिभ भनिन्छ। यस मोडमा, तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग एक निजी कोठा सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूसँग एक पछि अर्को प्ले गर्नुहोस्। तपाईं क्लिक गरेर यो खेल नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ।
Ap. एपेक्स: महापुरूष
एपेक्स महापुरूष एक खेल हो जुन टाइटन स्प्यान, रिस्पनका विकासकर्ताहरू द्वारा विकसित गरिएको हो। रेस्प्वेनले मूल आन्दोलन, प्रवाह र टिटानफलबाट शूटि taken लिएको छ र यसलाई सानो स्तरको ब्याटल रोयाल खेलमा राखिएको छ।एपेक्स किंवदंतिको ग्राफिक्स यथार्थपरक छन् कि यो पूर्ण रूपमा आधुनिक दिनको एफपीएस खेल जस्तो देखिन्छ।
यस खेलको विचार यो छ कि तपाईं नक्शामा आफ्नो टीमको साथ ड्रप-इन गर्नुहुन्छ सर्कि circle सर्कललाई बेवास्ता गरेर र शत्रुलाई मार्न तपाईंको विजय लिन। खेलमा फरक वर्णहरू छन् जुन भनिन्छ एक लिजेन्ड हो। प्रत्येकको एक विशिष्ट क्षमता छ जुन खेलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस खेलसँग सोलो, डुओस, र ट्रायसहरू जस्ता फरक मोडहरू छन्। दुर्भाग्यवस, यस खेलसँग स्क्वाड गेमि forको लागि समर्थन छैन।
एपेक्स महापुरूषमा प्रयोग गरिएको बन्दूकहरू साँच्चै राम्रो छ; शूटिंगको क्रममा, तपाईं आफ्ना शत्रुहरूबाट रगत निस्किरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, जसले यसलाई यथार्थपरक दृष्टिकोण दिन्छ। खेलसँग कुनै जटिल किबाइन्डि। छैन। यो बुझ्न को लागी सजीलो छ र Ace in-game। तपाईं एपेक्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ: क्लिक गरेर महापुरूष यहाँ ।
E. इलिसेमको घण्टी
ओह, अब इलिजियम बैटल रोयाल खेलहरूको क्रेजीयर रिंगहरू PUBG भन्दा आफूलाई अलग राख्नको लागि बजारमा आइपुगेको छ। यसको विशाल नक्शा र रोमाञ्चकारी अन्तिम क्षणहरूको साथ र कार्यहरू सम्बन्धी नयाँ अन्तर्दृष्टि सिर्जना गर्नुहोस्, Tencent को शीत-थीमाधारित रिंगहरू, जसले हालसालै पोलिश प्रारम्भिक-पहुँच शीर्षक जारी गर्‍यो, जसले यो विशेष देखिन्छ।
60० भन्दा बढी बिभिन्न खेलाडीहरू एक अर्काको बिरूद्ध खेलेका छन् घातक हिमपातबाट बच्न जुन दुर्गम हिमाल र शहरलाई अस्थिर बनाउँछ। अझै पनि, सर्कलले तपाईको पोइन्ट A देखि बिन्दु B सम्म कसरी यात्रा गर्छ भन्ने कुरालाई मिल्काउँदछ कसरी आकाश लिफ्टहरू, स्नोबोर्डहरू, ह्यान्ड-ग्लाइडरहरू, र पहाड चढ्ने गियरहरू जुन दर्शनीय शैलीको कल्पना समावेश गर्दछ। यो खेल थोडा पारम्परिक लडाई रोयल जस्तो देखिन्छ। यो खेल्नको लागि नि: शुल्क खेल हो जुन क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ यहाँ ।
त्यसैले यो PUBG जस्ता खेलहरूमा छोटो पोष्ट थियो जुन तपाईं खेल्न सक्नुहुन्छ। यस सूचीमा केहि उत्कृष्ट खेल शीर्षकहरू समावेश छन् जुन तपाईं PUBG को सट्टा खेल्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए, तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? जानुहोस् र तपाईंको मनपर्ने खेल डाउनलोड गर्नुहोस्, र हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाईं कुन खेल डाउनलोड र तल टिप्पणी वर्गमा खेल्नुहुनेछ।
अनलाइन वेबसाइटहरू स्ट्रीमि free नि: शुल्क चलचित्रहरू
फिल्महरू नि: शुल्क सिनेमाघरमा आउनु अघि हेर्नुहोस्
सीरियल टिभी अनलाइन निःशुल्क हेर्नुहोस्
चलचित्र र पपकोर्न नि: शुल्क चलचित्रहरू
jbl फ्लिप and र between बीचको भिन्नता
शीर्ष १० स्ट्रिमिंग फिल्म साइटहरू